3PLY BODY COPPER CLAD FRYPAN - Qalabka cusub ee Shanhai
Hoyga » Wax soo saar » Tri-ply All Clad copper Cook cookware » 3PLY BODY COPPER CLAD FRYPAN
This wok is made of 3-ply composited material copper clad with fast and even heat retention, kuleylka wanaagsan ee darbiyada qaro weyn leh, different sizes are acceptable.
Noogu soo dir emayl Nala soo xiriir
Nambarka Model: SC639
Goobta Asal ahaan: Guangdong, Shiinaha
Qaab: stright shape cut edge
Jirka: composited 3ply material copper clad
Been: high quality glass lid
Gacanta iyo garabka: guntay gacanta bir aan xirnayn iyo garaacid sidii xadidnayd
Dhameystir: Non-stick inner and mirror polish outer
Adeeg: ODM, OEM waa la heli karaa
Nooca Birta: 3Ply copper clad
Halabuurka: Stainless Steel composite body
Xidhmada: Bacda aan Xarka ahayn oo loogu talagalay daboolka iyo jirka, xirxirida sanduuqa hadiyadaha.
4dhigaysa kartoon aamin ah
Logo waa la sawiri karaa, daabacaadda xariir, dillaacid & laser
naqshadda astaanta & u dhigashada sidii looga baahan yahay macmiilka
45maalmood kadib xaqiijinta amarka la 30% dhigasho
Moodel 3PLY BODY COPPER CLAD FRYPAN
Waxyaabaha birta 304 0.5mm + Alu. 1.5mm+copper 0.5mm
Faahfaahinta gaarsiinta 45 -55maalmood kadib deebaajiga
Shuruudaha Bixinta T / T(30% horay u soco,70% shixnadda kahor)
S:Maxay yihiin qiimayaashaadu?
A:Qiimaheena waa la beddeli karaa iyadoo ku xiran waxyaabo kala duwan oo baahida macaamiisha ah, badiyaa ilaa maaddada kala duwan, cabirro, dhumuc, qalabka iyo xirmada. .Waxaan kuu soo diri doonaa qiimaha saxda ah salka shuruudahaaga loo habeeyay.
S:Ma soo saari kartaa iyadoo loo eegayo saamiyada ama sawirrada?
A:Haa, khibrad hodan ah ayaanu ku leenahay OEM / Adeegga ODM iyo iskaashiyada waaweyn ee shirkadaha waaweyni 15 sano ,waxaan ku soo saari karnaa samballadaada ama sawirro farsamo , waxaan u dhisi karnaa wasakhooyinka waxyaabaha aad ubaahantahay.
S:Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
A:Waxaan guud ahaan aqbalnaa LC marka la eego ama bixinta T / T. Amarro joogto ah, Shuruudaha lacag bixinta 30% dhigasho,bixinta buuxda kahor dhalmada.
S:Waa maxay waqtiga hogaamintu?
A:Waxay badanaa qaadataa 45 ku 55 maalmo amarkii ugu horreeyay ka dib xaqiijinta muunadda iyo helitaanka lacagtaadii hore.
S:Shinnidahan miyay si dhaqso ah u kariyaan cuntadeyda?
A: Haa. Tani waa qalabka wax lagu kariyo. Si dhakhso ah ayuu u kululaadaa sababta Aluminiumka loogu talagalay daarta dhexe, waa hayaha kuleylka ugu fiican, waxayna ku hayn kartaa waqti diiran sababta oo ah darbiyada qaro weyn.
S:Ma dammaanad qaadi kartaa inaad si ammaan ah oo aamin ah alaabta u gaarto?
A:Hubaal, Waxaan kaa caawin karnaa inaad u soo dejiso badeecadaada dekadaada adeegga hal-jooji ah adeegayaga gaarka ah. ,waana inaad hubisaa keenida alaabada si amaana oo aamin ah xirmo aad u wanaagsan
Adress: 14-219 Wadada Nanhai, HuangQi, NanHai,Foshan, GuangDong ,Shiinaha
Qalabka cusub ee Shanhai © 2021 XUQUUQDA XUQUUQDAADA Shuruudaha adeegsiga iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah